Chikwata chevabiridzi chinotyisidzira Apple nekuburitsa zvirongwa zveMacBook | Ndinobva mac
Chikwata chevabati chinotyisidzira Apple nekuburitsa zvirongwa zveMacBook
Toni Cortes | 21/04/2021 18:00 | dzakawanda
Apo isu tese tanga tichinakidzwa nezuro tichiona nhau dzekuti Apple yaive ichitiratidza mune yayo «Chitubu chakatakura«, Mumisangano yeCupertino yakaitwa pane yakaoma nyaya isina hukama zvachose neshoko rakakosha.
Zvinotaridza kuti chikwata chematsotsi chapinda mumaseva e Quanta Computer, mugadziri weTaiwan wezvinhu zveApple, uye awana mifananidzo yemisangano yeMacBook neMacBook Pro. Iye zvino bhendi iri kuda mari, asi ichityisidzira kutsikisa zvirongwa izvi. Iyo jira.
Sezvo ichangoburitswa The Record, chikwata chematsotsi chakadana Zvakaipa awana hurongwa hwekuvaka hwakawanda hweApple michina uye anotyisidzira kuvaita veruzhinji kana vasingagamuchire huwandu hwemari. Kushusha kweupenyu hwese, huya.
Aya marongero anoita kunge akawanikwa mushure mekurwiswa kwemaseva eQuanta Computer, kambani yeTaiwan inoshanda seimwe yemafekitori makuru eApple. Mune foramu mu Yakadzika Webhu, timu yeRevil inoti yawana mifananidzo yeinjiniya yemidziyo yakasiyana yeApple yakadai seMacBooks neApple Watch, ayo anoshandiswa neQuanta Computer kuunganidza zvigadzirwa zvakadaro.
Hackers vakaedza kubira kambani yeTaiwan kuti irege kugovana mafaera, asi kutaurirana hakuna kubudirira. Zvino, ivo vari kutyisidzira Apple zvakananga, vachikumbira iyo Cupertino-yakavakirwa kambani kubhadhara chitsama chemari zvisati zvabiwa mapurani akatumirwa paiyo Yakadzika Webhu.
$ 50 mamirioni kubiridzira
Seizvo mushumo unotsanangura, chikwata cheRevil chakabvunza Quanta 50 mamiriyoni emadhora. Hazvizivikanwe parizvino kuti imarii yavakabvunza Apple. Kuti varatidze kuti vane mafaera emukati akawanikwa kubva kuQuanta kudonha, iro boka rakaburitsa akati wandei maficha emafaira, achiratidza ruzivo rwegungano reMacBook Air neMacBook Pro.
Chikwata chedu chiri kutaurirana kutengeswa kwemazana emadhirama akavanzika uye magigabytes e data rako rine akawanda makuru mabhurani. Tinokurudzira kuti Apple itenge data rakadai zvekare pamberi paMay 1.
Kunyangwe iyo data iri yakavanzika, hazviratidzike kuti mainjiniya schematics akawanikwa neRevil hacker timu inoratidzira chero chinhu chakakosha pamusoro pemidziyo iri mubvunzo. Apple yakazivisa kuti iri "kuongorora chiitiko ichi" uye haina rumwe ruzivo rwekutaura panguva ino.
Boka rimwe chetero rakaedza kubiridzira mari kubva kune mamwe makambani munguva yakapfuura, senge anogadzira malaptop Acer, muzviito zvakafanana. Ichokwadi ndechekuti kana mimwe mifananidzo yegungano ikaburitswa, hazvisi izvo kuti zvakakosha zvakanyanya. Nekutorera mudziyo uye nekuona mavakirwo ayo, iwe unogona kuwana yakajeka pfungwa yezvinogona kuratidzwa neizvi zvirongwa. Vakomana vari paFixit vanogona kukwevera ivo pasina dambudziko rakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Chikwata chevabati chinotyisidzira Apple nekuburitsa zvirongwa zveMacBook
Yakarasika AirTags inogona kuwanikwa kunyangwe uchishandisa Android
watchOS 7.4 inowedzera ECG mashandiro eApple Tarisa kuAustralia neVietnam